i-elinks: Isiphequluli sewebhu esihle kakhulu sesiphelo se-Linux | Kusuka kuLinux
i-elinks: Isiphequluli sewebhu esihle kakhulu sesiphelo se-Linux
Kulezi zinsuku zokugcina, izinkinga zami zokuxhuma zikhule ngendlela esheshayo, njengamanje ngokuthembela ekuxhumekeni kwamahhala okuvela kumasipala, ngesivinini kanye nokulinganiselwa kokuphepha okubandakanya. Lo mkhawulo ungiphoqe ukuthi ngisebenzise kabusha iziphequluli ze-inthanethi Okokugcina kweLinux, impela, manje ngenza ucwaningo lwami kusuka kukhonsoli nokusebenzisa izindebe, engikuthatha njengokuhamba phambili kohlobo lwayo.
Lo muzwa wokuphoqelelwa ukuzulazula esigungwini, okuyindlela ephathekayo yokuthola ulwazi kwabaningi, ungikhumbuze izikhathi zami lapho ngafunda ukumisa amaseva ngaphandle kwesibonisi sokuqhafaza nokuthi ukuphela kwendlela obekufanele ukucwaninga okuthile kwakungalawa mathuluzi amahle kakhulu.
1 Yini ama-elinks?
2 Izici zokuxhuma
3 Ungayifaka kanjani i-elinks?
3.1 Faka ama-elinks ku-Debian nakokuphuma kokunye.
3.2 Faka ama-elinks ku-Red Hat nakwezinye izinto.
3.3 Faka ama-elinks ku-Arch Linux nakokuphuma kokunye
4 Ungayisebenzisa kanjani i-elinks?
ama-elinks Kuthuthukile isiphequluli sewebhu esibulalayo, umthombo ovulekile, obhalwe ngu Mikulas Patocka futhi kususelwa embhalweni wohlelo olusebenzayo olususelwa ku-UNIX, olunemisebenzi (i-HTTP / FTP / ..), kanye nokuxhaswa kozimele namatafula.
Leli thuluzi lenziwa ngezifiso kakhulu futhi ukusebenza kwalo kunganwetshwa ngezinhlelo zokusebenza ezibhalwe ku- ULua, uPerl, uRuby o Inkohliso. Izalwe ngenhloso yokuthuthukisa owandulelayo Links futhi kwanezelwa imisebenzi ehlukene kancane, phakathi kwayo ukusetshenziswa kwamathebhu ukuzulazula, ukufakwa kwamabhukhimakhi kanye nethuba lokulanda kugqame.
Ukusekela CSS y ECMAScript.
Kuhunyushelwe ezilimini eziningi.
Umlando, Amabhukhimakhi, Izinqamuleli zekhibhodi, Injini yokusesha.
Yenziwe ngezifiso kakhulu.
Ukufakwa okulula nokusetshenziswa.
Phakathi kwezinye izici eziningi.
Ungayifaka kanjani i-elinks?
Ukufakwa kwama-elinks kulula futhi kutholakala cishe kuwo wonke amakhosombe wokusabalalisa okuthandwa kakhulu. Ungangena kumthombo osemthethweni ngale miyalo elandelayo:
Faka ama-elinks ku-Debian nakokuphuma kokunye.
Faka ama-elinks ku-Red Hat nakwezinye izinto.
Faka ama-elinks ku-Arch Linux nakokuphuma kokunye
Ungayisebenzisa kanjani i-elinks?
Ungaqala ukuxhuma nge
noma, qala isiphequluli ngqo kuwebhu oyifunayo:
Ngenxa yazo zonke lezi zici, ukuphatha kwayo kalula, izinzuzo zokukwazi ukuzinweba ngokuya ngezidingo zami, izinga layo eliphakeme lokwenza ngokwezifiso nokufakwa kwalo kalula yikho okungenze ngacabanga ama-elinks"Isiphequluli sewebhu esihle kakhulu se-Linux terminal".
Wake wasisebenzisa lesi siphequluli sewebhu ngaphambilini? Kanjani?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » i-elinks: Isiphequluli sewebhu esihle kakhulu sesiphelo se-Linux
Engingakatholanga kuwo womabili ama-Debian ne-Archlinux nokho ukuthi ungavumela kanjani ukuphequlula ngamathebhu.
Njengoba u- @ federico ephawula, lezi yizinyathelo:
ngaphakathi kwe-Elinks, cindezela i-ESC bese ukhetha inketho yemenyu Ifayela -> Vula ithebhu entsha, noma ucindezele ukhiye we-t, bese ikucela ngokuzenzakalela i-URL entsha
Igcwalise kakhulu futhi ilungile le ndatshana, amaLuigys. Mayelana nombuzo obuzwe ngu- @tenshalito, ngaphakathi kwe-Elinks, ucindezela i-ESC bese uya enkethweni yemenyu Ifayela -> Vula ithebhu entsha, noma ucindezele ukhiye we-t, bese ikucela ngokuzenzakalela i-URL entsha. NjengoLuigys, ngisebenzisa i-Links2 ne-Elinks kakhulu, ngemuva kwe-Squid Proxy ngokufakazela ubuqiniso.
Ngiyabonga kakhulu uFederico, impela leyo impendulo yenkinga ye-tenshalite
e-Archlinux kusendaweni yokugcina umphakathi. usebenzisa i-pacman, hhayi i-yogurt. 🙂
Ingabe isebenza ku-tty?
I-athikili enhle kakhulu, ethakazelisa kakhulu.
Ngiwavumela kanjani ama-https ukuthi awawavuli amakhasi